Story Archives - Balsirjana
बालसिर्जना संवाददाता १२ असोज २०७६, आइतवार
एक दिनको कुरो हो । बादशाह अकबरको दरबार मानिसहरूले भरिभराउ भएको थियो । कुनै विशेष मुद्दाको सुनवाइ हुँदै थियो । त्यसैm बेला अचानक एउटी स्त्री एउटा पुरुषको साथ उपस्थित भई । यस्तो देखेर बादशाहले भइराखेको कार्यवाही रोकेर त्यस आइमाईसित सोध “के भयो तिमीलाई ?” त्यो आइमाईले भनी ण्महाराज...बाँकी
एक समयको कुरा हो । कुनै जङ्गलमा बस्ने करालेश्वर नामक सिंह र जङ्गली हात्तीको बीचमा घमासान युद्ध भयो । हात्तीको प्रहारबाट सिंह नराम्रोसँग घाइते भयो, हिंडडुल गर्न पनि नसक्ने भयो । आफ्नो मालिक सिंह शिकार गर्न असमर्थ भएको हुनाले सिंहको सेवक घुसरक नाम गरेको स्याल पनि भोकभोकै भयो...बाँकी
एउटा पोखरी थिया । त्यहाँ भ्यागुता र माछा बस्दथे । उनीहरू मिल्ने साथी थिए । उनीहरू एक दिन गफ गरेर बसिहरको बेलामा एकजना माझाी आएर जाल हाल्न थाल्यो । अनि उनिहरू झटपट पानी भित्र लुके । पानी भित्र गएपछि भ्यागुतो ले माछालाई भन्यो – हेर साथी ! अब...बाँकी
विवेकी मान्छे !
बालसिर्जना संवाददाता २३ भदौ २०७६, सोमवार
अचानक सुरू भएको आँधिबेहरीसहितको वर्षाले गर्दा सडकमा आवतजावत ठप्प भएको थियो । आकाशमा कालो बादल मडारिँदै थियो । मेघको कानै फुटाउने गढगडाहट र भीषण वर्षाले सबैको मनमा डर पसेको थियो । कताकता रूखहरू एकापसमा ठोक्किएको, हाँगाहरू भाँचिएको र चराचुरूङ्गीहरू चिँ चिँ गर्दै कराएको आवाज पनि सुनिन्थ्यो । मानिसहरू...बाँकी